Arsenal Butter Cookies 500G 1 Box – SUNNY eSTORE
Arsenal Butter Cookies 500G 1 Box
• Arsenal, Originally,ahigh – end quality butter cookie product from Denmark
• Mouth feels in slightly sweet and nutty crunchy texture with various shapes.
• A pleasure with Arsenal to share the moments
• Suitable to help digestive system for adults
• A premium cookies with loves for gift
Wheat flour, sugar, butter, shortening, egg, salt, coconut flakes and artificial flavour added
Thai Snack Online most famous butter cookies has arrived inared round package with lightly sweet taste and crunchy texture in various shape. A perfect gift for all occasions are now available for your prompt order with our daily shipping service serving authentic snacks right to your doorstep. No MSG. No Preservative.
Contains Wheat Flour, Egg and may contains Milk Powder and Soy Products
Yummy decorating cookies
Keep in an air tight container for best taste.
• ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ရိုးရာစဥ်ဆက်မုန့်ဖုတ်နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ထားသော ထောပတ်အရသာကွတ်ကီး ဖြစ်ပါသည်။
• မုန့်သားတစ်ခုစီတိုင်းတွင် နူးညံ့ပြီး ထောပတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပါးစပ်ထဲတွင်ပျော်ဝင်ပြီး ဆိမ့်သောအရသာရှိပါသည်။
• မိသားစုနှင့်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အတူပျော်စရာအချိန်လေးတွေကို Arsenal နဲ့ မျှဝေဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။
• အစာပြေအဖြစ်၊ မရှိမဖြစ် မနက်စာအဖြစ် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
• ဂျုံနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လူကြီးများအတွက် အစာချေအားကောင်းမွန်စေပြီး စားသုံးရန် သင့်တော်ပါသည်။
• လှပသောထုတ်ပိုးမှုစနစ်၊ သေသပ်လှပသော အပြင်ဗူးခွံတစ်ထပ်ပါဝင်သောကြောင့် လက်ဆောင်ပေးရန် အထူးတင့်တယ်ပါသည်။